DevLife: mutambo wevhidhiyo maunonyudza mune yeI indasitiri | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchida akasiyana evhidhiyo mitambo ipapo Devlife uchafarira. Iri zita idzva iro rave kuwanikwa muKutanga Kuwana pane iyo chitoro chemhepo kubva kuValve. Iri basa rakanaka kubva kuRoman Studios neMesote Mitambo, vari kuseri kweichi chiitiko chinoshamisa, uye kuti iwe unogona kunakidzwa kubva ikozvino nekuwana kwekutanga mune yechitoro chinozivikanwa chevaraidzo.
DevLife ndeye nyowani nyowani yeavo vari emhando dzisinganzwisisike dzemhando kuti vaunze zvimwe zvakasiyana kune yatove yakanyanya-kushandiswa vhidhiyo yemitambo indasitiri. Mune ino kesi iyo simulator yebhizinesi, mauri uchafanirwa kutarisira kambani, asi kwete chero imwe chete. Iyo kambani yakazvipira kukudziridza tekinoroji muIT chikamu. Mariri unogona kusarudza munda wecomputer indasitiri mauri kuda kushanda uye kunakidzwa nebasa rehope dzako ...
Izvo zvinokutendera iwe kuti upinde mune shangu dze mugadziri anotanga uyo anotanga chiitiko chitsva mukambani iri muchikamu ichi, uye asati asvitsa makore gumi nemasere. Munguva yekuita izvi, uchafanirwa kusangana nezvinetso zvebvumirano uye kubata nevatengi, pamwe nekugara pamwe nehunhu hwachembera huchava nezvaunoita iwe, hupenyu hwako nebasa rako.
Pindai hunhu DevLife zvakakosha zvinosanganisira:
Gadzira yako yega hunhu uye mutungamire iye muindasitiri yemakomputa kumuita achinje.
Huru huwandu hwehunyanzvi hwekudzidza kugadzira mawebhusaiti, maapplication, nezvimwe. Kusarudza mafambiro ebasa rako raunotora mune IT chikamu.
Tsvaga uye usangane nevatengi vako uye uvandudze hunyanzvi hwako kuburikidza nekudzidza.
Gadzira yako wega kambani, uine ako mapurojekiti, hire vashandi, chengetedza hupenyu hwavo uye kukura.
Mamiriro ezvinhu munzvimbo mbiri: kumba nebasa.
Maitiro ekuvaka kwaunotenga fenicha nyowani, kushongedza, zvishandiso, kugadzirisa zvivakwa, kugadzirisa mashandiro, nezvimwe
Zvese izvo izvo izvo iwe zvaunogona kuwana muKutanga Kuwana (ichagara ingangoita gore, nepo mamwe mikana achiwedzerwa kumutambo wekupedzisira) wemutambo-wekutamba uye wekuteedzera mutambo DevLife, iri zvakare inowanikwa yeGNU / Linux, dai wanga uchinetseka ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » DevLife: mutambo wevhidhiyo umo iwe uchanyudza mune iyo IT indasitiri
Spanish kwete akadaro
Semazuva ese, iwe unokanganwa kutaura kuti mutambo hausi muSpanish, saka haushandise zvishoma ipapo.
Chinhu chimwe ndechekuti haisi muchiSpanish uye imwe kuti haina chazvinobatsira. Ndiwo mutambo we devs, munyika ino chiRungu chinotungamira. Saka watoziva kare…